Dare reEU: Majekiseni ekumanikidza haatyori kodzero dzevanhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Dare reEU: Majekiseni ekumanikidza haatyori kodzero dzevanhu
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Dare reEU: Mishonga inodzivirirwa inotyora kodzero dzevanhu
Mutongo wedare unosimbisa mukana wekupora wekumanikidza pasi pemamiriro ezvinhu epanguva ino eCOVID-19
Kubaya vana zvirwere zvakajairika kuri mukufarira kwavo
Matanho aya anogona kutorwa seari 'kudiwa munharaunda yeruzhinji'
Chinangwa chaifanira kuve chekudzivirira mwana wese kuzvirwere zvakakomba
Mune chisarudzo chakakosha nhasi, European Court for Human Rights (ECHR) yatema kuti kubaya vana zvirwere zvakajairika ndiko kwakanakira ivo uye 'kunodiwa munharaunda ine hutongi hwevanhu'.
Sekureva kwenyanzvi dzemitemo dzinoshanda mune European Court Yekodzero Dzevanhu mitongo, mutongo wedare unosimbisa mukana wekumanikidzwa kubayiwa nhomba pasi pemamiriro ezvinhu epanguva ino eCOVID-19.
Ino ndiyo nguva yekutanga ECHR kutonga pamusoro penjodzi yekumanikidza vana kurwisa zvirwere zvakajairika. Nepo nyaya iyi yaibata nemitemo yeCzech Republic inoda kuti vana vechikoro vabatwe nezvirwere zvakaita sekukosora, tetanasi uye gwirikwiti, mutongo uyu une zvahunoreva kana zvasvika pakumanikidzwa kweCOVID-19.
"Matanho… anogona kutorwa seari 'kudiwa munharaunda ine hutongi hwegutsaruzhinji," dare rakapa mutongo pachisarudzo chakakosha pamusoro pevanovenga mhirizhonga.
"Chinangwa chaifanira kunge chiri chekudzivirira mwana wese kuzvirwere zvakakomba," dare rakadaro mumutongo waro.
Vatongi vakarasa chikumbiro chakaunzwa nevanhu vatanhatu vekuCzech avo vakabhadhariswa faindi nekutadza kutevedzera zvinodiwa nemishonga yekudzivirira kana vana avo vakarambidzwa kubvumidzwa kuenda kukireshi nechikonzero chimwe chete. Vabereki vanga vataura kuti mirawo yejabha inosungirwa yaityora kodzero dzavo.
Dare rakati kunyange hazvo majekiseni ekudzivirira akamutsa nyaya dzakaomarara, kukosha kwekubatana munharaunda kuchengetedza hutano hwenhengo dzese dzenzanga, kunyanya avo vainyanya kunetseka, zvaida kuti munhu wese atore mukana wekutora jabs.
Air Canada inorambidza kutsigira mweya mhuka
Hapasisinazve kutyisidzirwa kweTsunami kuHawaii, Guam, Saipan
12 Nyaya Surfside Condo Kuvaka paCollins Ave mu ...
Airbus Executive Committee inodoma nyowani Executive Vice ...
Russia inogumisa kurambidzwa kwendege kuenda kuEjipit ...
Naples, Marco Island uye Everglades CVB Executive ...
Mhinduro kuIndia Tourism package yekukurumidza uye ...